Reserve Crooked atọ, Crooked Osisi anụ ọhịa nsọ - Belize City
North America Belize Obodo Belize
Ndepụta nke atọ atọ
Adreesị: akụkụ dị n'etiti Belize;
Ekwentị: +501 223-5004;
Oge ọrụ: kwa ụbọchị site na 8:00 ruo 16:30.
Ebe nchekwa Crooked Tree (ma ọ bụ osisi Crooked, nke sụgharịrị "osisi gbagọrọ agbagọ" n'ihi ebe a na-agbagharị osisi cashew) bụ ebe nhicha pụrụ iche maka ihe karịrị ụdị nnụnụ abụọ na iri abụọ na abụọ. Ebe nchekwa ahụ gụnyere: lagoons, bogs, canals, mangroves. Ndị gbagọrọ agbagọ atọ bụ ebe dị mma maka njem nleta gburugburu ebe obibi.
Njem nke ebe a
Ụzọ kachasị mma iji mara ụwa nke ebe a bụ iji ụgbọ mmiri na-eduzi na saịtị (na-enweghị ntuziaka, a machibidoro mgbazinye ụgbọ mmiri). Mgbe ị na-agafe na mmiri na mmiri, onye ndu ga-enye gị aka ịgafe n'okporo osisi dịka okporo ụzọ ọhịa. Mma na obi ụtọ na-emesi obi ike!
Njem ụgbọ mmiri dị ihe dị ka awa atọ. Ọnụahịa ahụ kwenyere n'otu ebe (ọ dịghị ego ọ bụla). dị ka onye ndu nwere ike ime ọbụna nwata obodo, ọ bụghị dị ala karịa onye nduzi ọ bụla.
Reserve Kruked atọ na ókèala ya dị kilomita 12 n'obosara dị iche iche:
nnụnụ: egret, falcon, hummingbird, obere anụ nke Brazil (ogologo - 1.5 m, wingspan - 2.8 m, ogologo beak - 30-35 cm);
ụmụ anụmanụ: agụ iyi, enwere-esi, iguanas, nduru anụ mmiri;
osisi: cashew, fir, oak.
Nọrọnụ n'otu ebe na ebe nchekwa
N'obodo obodo ahụ, n'ọdụ ụgbọ mmiri dị nso nke ọdọ mmiri ahụ, ọ bụ ụlọ ezumike nkata Crooked Tree Lodge, nke gụnyere ụlọ isi na ụlọ 6 ọbịa na ịsa ahụ na ụlọ mposi. Ezigbo nri na nri ụtụtụ na-ewu ewu (n'ime ịsa ahụ mmiri na ụlọ mposi, TV cable, igwe oyi). Ndị a bụ ebe kachasị ewu ewu ebe ịnọ.
Ebe nchekwa ahụ dị n'etiti Central Belize . Obodo nke Crooked Three (otu n'ime ndị kasị ochie na Belize) bụ mpaghara etiti obodo ahụ.
Ụzọ kachasị mma isi mee njem bụ ịgbazite ụgbọ ala. Ala - obodo Orange Walk (site na Belize City - 50 kilomita);
ị nwere ike ịbanye na bọs ma ọ bụ jide n'ụgbọala.
Na ederede na njem nleta
Oge kacha mma ịbịa bụ oge akọrọ (site na December ruo April).
N'April, ị ga-ahụ ụdị nnụnụ dị iche iche.
Bird Brazilian yabiru - otu n'ime ndị kasị ukwuu. Enwere ike ichu nta nwa ogugu.
Ịgba ume n'okporo ụzọ nke Belize - ụkọ, ya mere, na-agbanye mmanụ ụgbọ ala iji mee ihe n'ọdịnihu. Gas mmanụ, site n'ụzọ, ọnụ - $ 3.5-4 US kwa 1 galọn.
Tupu ị banye n'obodo ahụ, e nwere ebe ị ga-ahụ ihe ngosi nke ihe ọkụkụ.
Ugwu National Park Santa Rosa
Baruk ugwu ugwu
Ụlọ ihe nkiri nke Panal Canal
Ọnụ ụzọ ámá nke Panal Canal
Ala nke abụọ America
Jiri akwa tulip mee uwe
Kendall Jenner n'ime mkparịta ụka nke Harper's Bazaar: "Ụmụnna m na-edozi na mpụga"
Ofe na croutons
Gịnị kpatara nrọ nke isi awọ?
Ejiji na akwa olu 2013
Feng Shui ụlọ obibi - ọnụ ụzọ
Tebụl kọmputa iko
Kedu mgbe nwa nwere ike inye tii?
Ekpuchi akara nke rịbọn
Kedu ka esi eme agaric?
Ihe caloric nke mkpụrụ cherị ọhụrụ
Mkpịsị ọnụ denim nwanyị
Kedu calorie ole ka dị na walnuts?
Gịnị na-enyere aspirin aka?
Obi Tomato Bull - njirimara na nkọwa nke ụdị dị iche iche, iwu na-eto eto
Ntughari maka umu
Kedu ihe bụ capers, otú ha si ele anya - Ezi ntụziaka maka nri ụtọ ma na-atọ ụtọ